सत्ता स्वार्थले कांग्रेसमा तैं चूप मै चूप - नेपालबहस
सत्ता स्वार्थले कांग्रेसमा तैं चूप मै चूप
| १६:३१:२२ मा प्रकाशित
२ फागुन काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन अबको पाँच दिनमा हुने समय तालिका रहेको छ । तर महाधिवेशन गर्ने तयारी भने शून्य नै छ । महाधिवेशन सार्न सहज पनि छैन्, नसारी उपाय पनि छैन् । त्यसैले पार्टी भित्रका शक्तिकेन्द्रहरु शिथिल देखिएका छन् ।
महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बनाउनै पर्ने बाध्यता छ, तैपनि नेतृत्व भने सर्वाेच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धाको निर्णयको पर्खाईमा देखिएको छ । सर्वाेच्चबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म कहिले महाधिवेशन गर्ने भन्ने द्विविधामा दुबै पक्ष रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सर्वाेच्चले विघटन सदर गरिदियो भने आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि सबै पक्षमा संस्थापन पक्षले हालीमुहाली गर्न पाउने अपेक्षा गरेको छ । त्यसैले सभापति शेरबहादुर देउवालगायत संस्थापन पक्ष भरसक पुनस्थापना नहोस् भन्ने चाहना राख्छ । त्यस्तो स्थिति बन्यो भने विभाजित नेकपाको फुटको प्रभाव निर्वाचनमा पर्ने र आफू पक्षीय उमेदवार विजयी हुने अनुमान देउवाको रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा देउवालगायत संस्थापन पक्षको चाहना चुनावमै केन्द्रित छ ।
महाधिवेशन अगाडि नै आम निर्वाचन भयो भने देउवा नै शक्तिशाली हुने अनुमान गर्ने यो समूहले पहिला महाधिवेशन अनि मात्र चुनाव होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । महाधिवेशन अगाडि हुन प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनु अनिवार्य सर्त बनेको छ । पुनस्थापना भयो भने संस्थापन इतर पक्षको ध्यान सम्पूर्ण रुपले महाधिवेशन केन्द्रित हुने भएकाले फाइदा हुने अनुमान गरिएको हो ।
चुनाव भयो भने महाधिवेशनको तालिका स्वभाविक रुपमा भदौसम्म टर्ने र आफू बलियो हुने अनुमान देउवा पक्षको रहेको छ । पुनस्थापना हुँदा चाहिं संसदीय गतिविधिमा सकृय हुनुपर्ने र सरकार बनाउने बेला पार्टीमा किचलो हुनसक्ने बुझाई संस्थापन पक्षको रहेको छ । त्यसैले अहिले केही गर्ने पक्षमा देखिएको छैन् ।
उता, संस्थापन इतर पक्षको बुझाई पनि उस्तैछ । पुनस्थापना भयो भने मात्रै आगामी महाधिवेशनमा देउवालाई पराजित गर्न सकिने बुझाई रहेको छ । पुनस्थापना भयो भने सरकारमा आफूपक्षीय नेताहरुको सहभागिता बढी रहने र देउवाको सकृयता पनि सत्तातिरै केन्द्रित हुँदा इतर पक्षको एकता अझै सुदृढ हुने अनुमान यो पक्षले गरेको देखिन्छ ।
पुनस्थापना हुनु भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुनु हो भन्ने मान्यता बोकेको संस्थापन इतर पक्षले पनि सर्वाेच्चले फैसला नगरेसम्म महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बनाउनेतिर खासै ध्यान दिएको पाइँदैन् । त्यसैले गर्दा पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत महाधिवेशन बारे कसैको खोजी र रुचीको विषय बनेको छैन ।
पार्टीको क्रियाशील सदस्यता संख्या पाँच लाखबाट बढाएर १० लाख पु¥याउने र पार्टी एकीकरण गरी आएकाहरुलाई समायोजन गर्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ । जसले गर्दा कोहीपनि यसबारे टाउको दुखाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
महाधिवेशन अगाडि नै आम निर्वाचन भयो भने देउवा नै शक्तिशाली हुने अनुमान गर्ने यो समूहले पहिला महाधिवेशन अनि मात्र चुनाव होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । महाधिवेशन अगाडि हुन प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनु अनिवार्य सर्त बनेको छ । पुनस्थापना भयो भने संस्थापन इतर पक्षको ध्यान सम्पूर्ण रुपले महाधिवेशन केन्द्रित हुने भएकाले फाइदा हुने अनुमान गरिएको हो । जबकी यस्तो अवस्थामा संस्थापन पक्षले संसदीय प्रकृयामा नै धेरै उर्जा खर्चने अवस्था आउने र सत्तामा जाँदा देउवाप्रतिको आक्रोश र असन्तुष्टि थप चुलिने सम्भावना बढ्ने बुझाई यो पक्षको रहेको छ ।
यही फागुनको ७ देखि १० गतेसम्म राजधानीमा गर्ने गरी निर्धारण गरिएको समय तालिका फेर्न समेत कसैलाई चासो छैन । महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण हो । यो कामको थालनी भएको एक वर्ष नाघिसक्यो । तर अझै पूर्ण भएको भने छैन । यो काम समेत आधा पूरा गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन हुने भन्ने त कुनै प्रश्न नै भएन । यो मुद्धा उठाउन कोही इच्छुक नहुनुका पछाडि कसले अपजस लिने भन्नेतिर गएको छ ।
अब संस्थापन पक्षले नै नयाँ कार्यतालिकाबारे प्रसंग उठाओस् भन्ने सोच संस्थापन इतरको रहेको छ । तयारी पूरा नभएको अवस्थामा यो विषय उठाउने चाहना कसैले गरेको छैन । त्यसैले यो विषयमा सबै तैं चूप मै चूप को अवस्थामा देखिन्छन् । यस्तै , पार्टीको क्रियाशील सदस्यता संख्या पाँच लाखबाट बढाएर १० लाख पु¥याउने र पार्टी एकीकरण गरी आएकाहरुलाई समायोजन गर्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ । जसले गर्दा कोहीपनि यसबारे टाउको दुखाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
ओलीले पदमा टाँसिएर गफ दिनु लज्जास्पद : पौडेल २० घण्टा पहिले
कांग्रेस लुक्न मिल्दैन २२ घण्टा पहिले
ओलीको भविश्य कांग्रेसको हातमा २ दिन पहिले
सभापति देउवाद्वारा डा. उप्रेतीको निधनप्रति दुःख व्यक्त २ दिन पहिले
कांग्रेस सरकारमा जाने भन्ने बेमौसमी कुरा मात्र हुन : डा.कोइराला २ दिन पहिले
वीरगञ्ज कारागारबाट युवक चरेससहित पक्राउ ४ मिनेट पहिले
वातावरण संरक्षणमा अग्ला रूखको विशेष महत्व हुन्छ : प्रम ओली १० मिनेट पहिले
२ वर्षमा ४७ अर्बको राजश्व छली, एक हजारविरुद्ध मुद्दा १४ मिनेट पहिले
घरघरमा पानी पु¥याउने अभियानमा स्थानीय तह १८ मिनेट पहिले
रेशमलाई जेलमा राखिरहने तागत अब कसैसँग छैन् : महतो २२ मिनेट पहिले
विप्लवले प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउँदै २६ मिनेट पहिले
निर्माणाधिन व्यपारिक बजार केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेन ३१ मिनेट पहिले
विराट इन्स्टाग्राममा धेरै फलो गरिने खेलाडीको चौथो स्थानमा ३३ मिनेट पहिले
प्रवीण बाँस्तोला हत्या प्रकरणमा थप एक प्रतिवादी पक्राउ ३६ मिनेट पहिले
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी जवाफसहित हाजिर हुन अदालतको आदेश ३९ मिनेट पहिले
दूधमा अनुदानः उत्पादन बढाउँदै किसान ४५ मिनेट पहिले
कटाक्षे विद्युत्गृहको काम असार मसान्तसम्ममा सक्ने ४७ मिनेट पहिले
असिनापानी र रोगका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी ५१ मिनेट पहिले
विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन ५३ मिनेट पहिले
डिम्याट एकाउण्टको संख्या ३० लाख पुग्यो, दुई सातामा २ लाखले नयाँ डिम्याट खाता खोले ६ घण्टा पहिले
म खाऊँ मै लाऊँ भन्ने भावना त्याग्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान २२ घण्टा पहिले
नारेश्वर ताल निर्माणका लागि एक करोड मुआब्जा वितरण १ घण्टा पहिले
बेलायतका राजदूत रेग्मीद्धारा पदबहाली ३ घण्टा पहिले
कैदीबन्दीबीच भएको झडप अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन २३ घण्टा पहिले
पर्साबाट गाँजासहित दुईजना पक्राउ १९ घण्टा पहिले
बागलुङको विकट गाउँमा विद्युत पुगेपछि स्थानीयवासी हर्षित २२ घण्टा पहिले
प्रचण्ड-माधव नेपाल संसदभित्र कुन बेन्चमा बस्दै छन ? ३ घण्टा पहिले
मास्टरसेफ सन्तोष साह काठमाडौंमा ५ दिन पहिले
मानेभञ्ज्याङमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना २३ घण्टा पहिले
एक वर्षसम्म ज्याला नपाएको मजदूरको गुनासो ५ दिन पहिले
म्यान्मारमा सेनाले चलाएको गोली लागेर तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु २ दिन पहिले
तुम्लिङटार विमानस्थलको धावनमार्गको मर्मत सम्भार शुरु ३ हप्ता पहिले
पहिला पुनस्थापना अनि चुनावः डा.रिजाल १ हप्ता पहिले
दिल्लीमा डा. भट्टराईको आज स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै १ हप्ता पहिले
कम्यूनिष्टबिहीन देश बनाएर कांग्रेसले जनताको सुखदुःखमा साथ दिनुपर्छ : कांग्रेस नेता पाण्डे ४ दिन पहिले
चुनाव कि पुनस्थापना ? ग्राण्ड डिजाइन नै हाे त ? १ हप्ता पहिले
एकै दिनमा कोरोनाबाट ब्राजिलमा १ हजार ३५१ को मृत्यु ३ हप्ता पहिले
विद्यार्थी नभएको विद्यालय २ हप्ता पहिले
प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न अमेरिकासँग इरानको पुनः आग्रह २ हप्ता पहिले
रोल्पामा थप १४ जनामा कोरोनाकाे पुष्टि, संक्रमितको संख्या १७ नाघ्यो ९ महिना पहिले
गाडी रोकेको हो, जलाउन खोजेको होइन : नेविसंघ झापा ३ महिना पहिले
कुमारी बैंकलाई छैन् स्प्रेडदरको तनाव, ऋणपत्र निश्काशनपछि सीसीडी रेसियो सन्तुलनमा आउने १ वर्ष पहिले
आज मदन भण्डारीको २५ औँ स्मृति दिवस, घटना अझै रहस्यमय २ वर्ष पहिले